दशरथचन्द अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण अलपत्र - सुदूरखबर डटकम
दशरथचन्द अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण अलपत्र
label सुदूर खबर संवाददाता query_builder February, 05 2019
बैतडी, माघ २२ । अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा एकपछि नेपालले अर्को सफलता हात पारिरहेको छ । नेपालले हालै मात्र युएईसंगको एकदिवसिय र टी–२० हात सिरिज पार्यो । तर, नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली सधै उचित खेलमैदानकै अभावकाबिच अन्र्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न जान्छ । नेपालमा अन्र्तराष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माणको काम सुरु समेत भईसकेका भएपनि बर्षौदेखि अलपत्र अवस्थामै छन् । जसको एक उदाहरण हो बैतडीका अलपत्र अवस्थामा रहेको दशरथचन्द अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला ।
सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला बैतडीमा ४ वर्ष अघि सुरु भएको सुविधासम्पन्न अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको दशरथचन्द क्रिकेट रंगशाला निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र निर्माण कार्यमा संलग्न ठेकेदारबीचको विवादका कारण करोडौंको काम अलपत्र परेको हो । सुदूरपश्चिममै पहिलोपटक करीब ११ करोडको लागत अनुमान सहित बैतडी सदरमुकाम नजिकै सुन्दरखालीमा दशरथचन्द क्रिकेट स्टेडियमको निर्माण ३ वर्ष अघिदेखि रोकिएको छ ।
४ वर्ष अघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले बहुद्देस्यीय क्रिकेट स्टुडियम निर्माणका लागि काम सुरु गर्दा चन्द्रा एण्ड बसन्त कन्सट्रक्सनले निर्माण जिम्मा पाएको थियो । जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिका ५ सुन्दरखालीमा वि स २०६३ मा दशरथचन्द नगरपालिकाले निर्माण सुरु गरेको क्रिकेट मैदानलाई र वि स २०७१ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले दशरथचन्द अन्र्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान भनेर निर्माण सुरु गरेको हो ।
वि स २०३४ सालमा दशरथचन्द नगरपालिका स्थित सुन्दरखालीमा मात्र क्रिकेट खेल्ने गरिन्थ्यो त्यसपछि वि स २०५२ सालपछी त्यस मैदानलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउन सबैको ध्यान पुग्यो ।
सदरमुकाम नजिकैको सुन्दरखाली क्रिकेट मैदानमा चार वर्ष अघिसम्म क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन हुन्थ्यो । त्यही मैदानमा खेलाडीले अभ्याससमेत गर्न पाउथे । जिल्ला स्तरदेखि क्षेत्रीयस्तरका प्रतियोगिता हेर्ने पाउँदा स्थानियबासी हर्षित भएका थिए । तर अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण कार्य सुरु भएपछि प्र्रतियोगिता समेत हुन पाएको छैन ।
मैदान निर्माण कार्य अधुरो भएपछि खेल सञ्चालन हुन नसकेको हो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको लापरवाहीले निर्माण कार्य अधुरो रहेपछि खेल्न लायक मैदान झन बिगारेको खेलाडी बताउँछन् । बनेको मैदान भत्काइएपछि प्रतियोगिता हुन सकेको छैन । तत्कालिन जिविस, नगरपालिकाको सहयोगमा निर्माण भएको मैदान निर्माण कार्य रोकिएपछि खेल्नलायक नहुँदा जिल्लामा क्रिकेट गतिविधि सुस्ताएको छ ।
तीन वर्षमा करिव ११ करोड ५० लाख लागत अनुमानसहित निर्माण हुने मैदानको काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले मैदान निर्माणको लागि रकम निकासा नगर्दा खेलमैदान अलपत्र परेको हो । मैदान सम्याउन करिब एक करोड १९ लाखमा ठेक्का भए पनि पुरै रकम निकासा नहुँदा मैदान सम्याउने कामसमेत अधुरो छ ।
निर्माण कार्य अनिश्चित भएसँगै स्थानीय खेलाडीका लागि खेलमैदान अभाव भएको छ बैतडी जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष लालबहादुर चन्दले बताए । उनले भने ‘निर्माण कम्पनीले राखेपले काम नगरेको बताउँछ । राखेपले काम भएको छैन भन्दै आएको छ । यसले क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ ।’
दुई दशक अघि बैतडीमा क्रिकेट भित्रिएसँगै सुन्दखालीमा क्रिकेट फिल्ड निर्माण गएिको थियो । यही फिल्डमा अभ्यास गर्दागर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा महत्वपर्ण योगदान पु¥याएका यहाँका खेलाडीको लागि मैदानको नै अभाव हुन चिन्ताको विषय भएको अध्यक्ष चन्दको भनाइ छ । सुविधासम्पन्न स्टेडियम निर्माण सुरु हुँदा उत्साहित बनेका क्रिकेटप्रेमी तथा प्रतिभावान खेलाडी अहिले चिन्तित भएकाले निर्माण कार्य अघि बढनुपर्ने स्थानीय बताउँछन् ।
नियमित अभ्यासका साथै स्थानीय प्रतियोगिता संचालन गर्न नसकिने अवस्था आएकाले खेलमैदानको निर्माण सुरु हुनुपर्ने स्थानीय क्रिकेट खेलाडी गजेन्द्र बोहराले बताउनुभयो ।‘मैदान भत्काइएपछि स्थानीय खेलाडी सदमुकामभन्दा ११ किलोमिटर टाढाको देहिमाण्डौं र रातामाटाको बुड्डाबाजे मैदान जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । टाढाको खेल मैदान एकातिर सानो आकारको छ, भने समय र खर्चिलो भएको खेलाडीको गुनासो छ ।
बैतडीमा क्रिकेटका लागि गतिलो मैदान नहुँदा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकिएको खेलाडी रोशन बोहराले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हाम्रो यहाँ अन्तरराष्ट्रियस्तर क्रिकेट मैदान बनाउने भन्ने चर्चा थियो । भएको मैदान पनि बिग्रिएको छ । हामीहरुले सडकमा अभ्यास गर्नुपर्ने बाध्यता छ । क्रिकेट मैदान नहुँदा बाहिर राम्रो प्रर्दशन गर्न सकिदैन् ।’
अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट स्टेडियम ५५ गजभन्दा बढी खेलमैदान, डे«सिङरुम, पेभेलियन, प्रशासकीय भवन, जिम हल, प्राक्टिस हलसहितको सुविधासम्पन्न खेलमैदान बनाउने भनिए पनि निर्माण कार्य रोकिँदा खेलमैदान अलपत्र अवस्थामा छ ।
नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान) अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको गुहजिल्ला समेत रहेको बैतडीमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण हुँन लाग्दा यसलाई चासोको रुपमा हेरिएको छ । राखेपले क्रिकेट मैदानमा निर्माणमा चाँसो नदेखाएका कारण क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य अलपत्र परेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो
“ जब दशरथचन्द क्रिकेट मैदान बनाउने भनेर राखेपले हात हाल्यो न क्रिकेट मैदान बनेको छ न खेलाडीहरुका लागि वैकल्पिक खेलमैदान छ ”
अलपत्र अवस्थामा रहेको उक्त अन्र्तराष्ट्रिय रंगशाला निर्माण कार्य अगाडी बढाउन आवश्यक छ । निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्न सक्यो भने खेलाडी र खेलप्रमी तथा समग्र बैतडीको लागी सुखद पक्ष हुने देखिन्छ ।
सम्झौताअनुसार काम भएको दाबी
सम्झौता अनुसार आफूले काम गरेको निर्माण कम्पनीको दाबी रहेको छ । सम्झौता अनुसार हामीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौ चन्द्रा एण्ड बसन्त कन्सट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक गणेश चन्दले भने, ‘खाल्डाखुल्डी छ मैदानमा भन्ने राखेपले आरोप लगाएको छ ।’
गतबर्ष नै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको र हामीलाई जानकारी नदिईकनै रंगशाला निर्माणको अनुगमन गरेको समेत उहाको आरोप रहेको छ ।
निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर बिल पेस गरेका छाँै प्रक्रिया चलिरहेको छ निर्माण कम्पनीका ठेकेदार सुरेस चन्दले भने, ‘६३ हजार घनमिटर माटो काट्ने सम्झौता भएको हो ।’
ठेकेदारले स्वीकृत ठेक्का रु एक करोड १९ लाख बराबरको काम गरेपनि खेलकुद परिषदले पुरै रकम भुक्तानी नदिएको दाबी गरेको छ भने खेलकुद परिषदले कामको मुल्यांकनका आधारमा रकम भुक्तानी दिइसकेको बताएकोले विवाद बढेको बताइएको छ ।
खेलाडीहरुलाई खेलमैदानको अभाव
काम रोकिएर निर्माण कार्य अनिश्चित भएसँगै स्थानीय खेलाडीहरुका लागि खेलमैदान अभाव भएको छ । डेढ दशक अघि बाट क्रिकेटको सुरुवात भएसँगै बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाको सुन्दरखालीमा क्रिकेट फिल्ड निर्माण गरिएको थियो ।
यही फिल्डमा अभ्यास गर्दागर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको बैतडीमा हाल आएर खेलमैदानको नै अभाव भएको क्रिकेट एसोसिएसन नेपाल क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बताए ।
सुविधासम्पन्न स्टेडियम निर्माण सुरु हुँदा उत्साहित बनेका क्रिकेट प्रेमी तथा प्रतिभावान खेलाडीहरु अहिले चिन्तित भएका छन् । उनले भने,–‘निर्माण कार्य जुनसुकै हालतमा पनि चाडो भन्दा चाडो अघि बढ्नुपर्छ ।’
दुबै पक्षबीचको टक्राउका कारण क्रिकेट खेलाडीहरु भने मर्कामा पर्नुका साथै अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको दशरथचन्द क्रिकेट रंगशाला निर्माण कार्य जिल्लामा कुनै पनि क्रिकेट प्रतियोगिता हुदाँ समेत समस्या हुने गरेको छ ।
जिल्लामा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण हुदा हर्षित भएका स्थानिय खेलाडीमा भने केही निरासा छाएको छ । नियमित अभ्यासका साथै स्थानीय टुर्नामेन्टहरु संचालन गर्न नसकिने अवस्था आएकाले खेलमैदानको निर्माण सुरु हुनुपर्ने स्थानीय क्रिकेट खेलाडी मोहित भण्डारीले बताए ।
बैतडीमा क्रिकेट प्रति आकर्षण बढ्दै गएपनि उचित खेलमैदान भने बन्न सकेका छैनन् । बर्षमा बिभिन्न टुर्नामेन्ट गर्दा स्थानीय खेलाडीहरु उत्पादन हुने भएपनि दुई बर्ष यता आफूहरुले कुनै टुर्नामेन्ट गर्न नसकेको अर्का क्रिकेट खेलाडी रिसिकेस बोहराको भनाइ छ ।
दशरथचन्द क्रिकेट मैदान भत्काइएपछि स्थानीय खेलाडीहरु सदरमुकामभन्दा ११ किलोमिटर टाढाको देहिमांडौं र बुड्ढामा रहेको धुलाम्मे मैदानमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । टाढाको खेलमैदान एकतिर सानो आकारको धुलाम्मे रहेको र अर्का्तिर त्यहाँसम्म जान खर्चिलो हुँदा समस्या भएको छ ।
करीब ११ करोडमा निर्माण हुने भनिएको क्रिकेट स्टुडियममा ५५ गेजभन्दा बढीको खेलमैदान, डे«सिङ रुम, पेभेलियन, प्रशासकिय भवन, जिम हल र प्राक्टिस हल सहितको सुविधासम्पन्न खेलमैदान बनाउने तयारी अलपत्र परेको छ । रंगशालाको निर्माण कार्य तिन बर्षभित्रै सम्पन्न गरिसक्ने गरि ११ करोड अनुमानित बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार र प्रशिक्षण नपुग्दा स्तरीय क्रिकेट खेल्न र राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता गराउन नसक्दा बैतडीका खेलाडी समस्यामा परेका बेला रंगशाला बन्दा केही उत्साहित खेलाडी निरासा बन्न पुगेका हुन ।
मैदान अभावमा प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा सरकारले खेलमैदान निर्माणका खेलमैदान निर्माण हुन सकेको छैन ।
रंगशाला निर्माणपछि भारतसँग सीमा जोडिएको सो ठाउँमा भारतका खेलाडी आउन सक्ने र खेलको स्तरसमेत बढ्न सक्ने आकलन समेत गरिएको छ ।
बैतडीबाट राष्«िटय तथा अन्र्तराष्«िटय महिला र पुरुष गरी दर्जनौं क्रिकेटर जन्माईसकेकोले रंगशाला निर्माण भएपछि थप सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ ।
विगत तीन वर्ष यतादेखि निर्माणकार्य अलपत्र रहेको बैतडीको सुन्दरखाली क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न स्थानीय सरकारले चासो देखाएका छन्।
दशरथचन्द नगरपालिकाले उक्त मैदान निर्माणमा चासो देखाएपछि अलपत्र क्रिकेट मैदान निर्माणको काम सुरु भएको हो । यसले खेलाडीहरुमा पनि उत्साह छाएको छ ।
‘खेलकुदको विकासका लागी मैदान निर्माण कार्य अघि बढाउन जरुरी भएकाले अलपत्र अवस्थामा रहेको सुन्दरखानी क्रिकेट मैदानलाई सम्याउन सुरु गरिएको हो ।’ दशरथचन्द नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र सिंह थापाले भने ।
राखेप र निर्माण कम्पनीको बिबादका कारण उक्त खेलमैदानको निर्माण कार्यले तिब्रता पाउन सकेको थिएन । खेलमैदान निर्माणले पूर्णता नपाउदा स्थानीय खेलाडीहरु मर्कामा परेको भन्दै दशरथचन्द नगरपालिकाले सुविधा सम्पन्न बनाउन नसकेपनि सम्याएर खेल्न लायकको बनाउन काम सुरु गरेको हो । अलपत्र रंगशाला निर्माणका लागी बैतडी उद्योग बाणिज्य संघको अध्यक्ष नरबहादुर चन्दको पहलमा नगरपालिकाले निर्माणकार्य सुरु भएको हो ।
देशैभरी सडक देखि पुल निर्माणमा धोकादिदै हिड्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गर्न निर्देशन
साँझको समयमा हावाहुरी सहित बर्षा हुने संम्भावना ! यस्तो छ आगामी दिनको मौसम विवरण
सबै नेपाली जनसमुदाय सावधान होऔं ! लिची खादा बिहारमा ४८ बालबालिकाको मृत्यु, दर्जनौको आइसीयुमा उपचार हुदै
साइबर अपराधको अभियोगमा पक्राउ परेका प्रनेश रिहा भए
रामेछापमा बस दुर्घटना : २ जनाको मृत्यु, १३ घाइते
पाँच वर्षीया बलात्कार गरेको आरोपमा १३ वर्षीय बालक पक्राउ